शिल्पालाई तेस्रो झड्का,यस्तो छ भित्री कारण – Jaljala Online
साउन २, काठमाडौँ । लन्डनमा छँदाखाँदाको करिअर र पढाइ छाडेर शिल्पा मास्के नेपाल आएकी थिइन्। अझ हलिउड फिल्म ‘डाक्टर स्ट्रेन्ज’ मा काम गरेको प्रोफाइल पनि थियो।
यो खबर हामीले अन्नपूर्ण पोष्टबाट लिएका हौ । यही कारण सुरु–सुरुमा उनलाई केही मिडियाले हलिउड हिरोइन भन्ने गर्थे। उनको सुरुवात पनि दमदार थियो।
नेपालका केही गिनेचुनेका निर्देशकमा पर्ने हेमराज बिसीको मेगा बजेट फिल्म ‘ब्रेकअप’बाट उनको डेब्यू हुँदै थियो। अपोजिटमा थिए, आशिरमान देशराज जोशी। तर, अनमोल केसीको ‘क्याप्टेन’सँग जुध्न आएको फिल्मले लज्जास्पद व्यापार गर्‍यो। शिल्पालाई डेब्यूले नै डुबायो।
यसपछि शिल्पाले खेलिन् ‘कागजपत्र’, जो ‘ब्रेकअप’भन्दा ठीक विपरित जान्राको फिल्म थियो। शिल्पाले काम पनि राम्रै गरेकी थिइन् तर यो फिल्मले पनि गति छाड्यो। बक्स अफिसमा लामो समय टिकेन। यसै बीच शिल्पाको हातमा आइपरेको थियो, ‘सानो मन’।
भावानात्मक प्रेमकथा समेटिएको यो फिल्मबाट शिल्पालाई ठूलै आश थियो तर यसले पनि पुरानै फिल्मको बाटो समात्यो। एक त बासी कथा, त्यसमाथि मनसुनको समय। दर्शक हलमा टेकेनन्। हेर्दाहेर्दै शिल्पालाई तेस्रोले पनि धोका दिएको छ।
शिल्पाको ‘व्याडलक’: ‘फ्लप फिल्मको ह्याट्रिक’
चलचित्र ‘दि ब्रेकअप’ रिलिजको समयमा नायिका शिल्पा मास्केको खुबै चर्चा थियो ।
यो खबर हामीले अनलाइनखबरबाट लिएका हौ । हलिउड चलचित्रमा समेत काम गरिसकेकी शिल्पाले पहिलो चलचित्रबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाइन् । तर, व्यापारिक रुपमा भने चलचित्र असफल रह्यो ।
लगतार तीन चलचित्रको असफल भएपछि शिल्पाले असफलतामा ह्याट्रिक गरेकी छिन् । काम र सुन्दरताको प्रशंसा नै भएपनि शिल्पाले सफल चलचित्र भने दिन सकेकी छैनन् ।
शिल्पाले चलचित्र क्षेत्रलाई गम्भिर रुपमा लिएको बताउँछिन् । तर, कलाकारका लागि हिट चलचित्र आवश्यक पर्दछ । शिल्पाको असफल चलचित्रको श्रृङ्खला रोकिएन भने उनका लागि चलचित्र क्षेत्रमा करिअर अगाडि बढाउन गाह्रो पर्दछ ।
नयाँ ‘अफेयर’मा आँचल, को हुन् उनि ?
आँचल शर्मा र पल शाहको ब्रेकअपको चर्चा बासी भइसक्यो।
यो खबर हामीले अन्नपूर्ण पोष्टबाट लिएका हौ । पलले पूजा शर्मासँग फिल्म खेल्न राजी हुनु नै यसको प्रमाण हो। नत्र पूजालाई फुटेको आँखाले पनि देख्न नसक्ने आँचल पललाई पूजासँग फिल्म खेल्ने अनुमति दिन कसै गरी राजी हुन्नथिन्। सेलिब्रिटीको प्रेममा दुइटाको बीचमा तेस्रो आएपछि ब्रेकअप हुन्छ।
अहिले आँचलको जीवनमा अर्को कोही आएको हल्ला छ। र, यो हल्लालाई सही साबित गर्दै छिन्, आँचल स्वयं। उनले गत हप्ता आफ्नो इन्स्टामा एक युवकको फोटो राखिन्। यी फोटोमा भएका व्यक्ति थिए, अभिनेत्री तथा भलिबल खेलाडी सिपोरा गुरुङका पूर्वप्रेमी, उदीप श्रेष्ठ। उदीप र सिपोराले इन्गेजमेन्टसमेत गरेको हल्ला थियो।
यिनै उदीपलाई आँचलले आफ्नो ‘बेस्टेस्ट फ्रेन्ड’का रूपमा इन्स्टामा परिचित गराएकी थिइन्। मिल्ने साथीलाई ‘बेस्ट फ्रेन्ड’ भन्दा पनि पुगिहाल्थ्यो तर ‘बेस्टेस्ट’ लेखेर आँचलले उदीपसँगको गाइँगुइँलाई आफैँ पुष्टि गरिदिइन्। तर, जब फोटोले समाचारमा स्थान पाउन थाल्यो, उनले फोटो डिलिट हानिन्। यदि आँचलले लेखेझैँ उदीप साथी मात्र थिए भने किन फोटो डिलिट गर्नुपथ्र्यो र ?
अस्ट्रेलियामा ‘मल्टिपल भिषा’ थप्न यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ ? होस् गर्नुस्, जे’ल पुगिएला
कात्तिक ३०, सिड्नी । पछिल्लो हप्ता एक वर्षे मल्टिपल भिषामा अस्ट्रेलिया आएका रमेश (नाम परिवर्तन) तीन महिनाको प्रारम्भिक बसाइ सकेपछि इन्डोनेशियाको बाली गए। यो खबर हेमन्त काफ्लेले सेतोपाटीमा लेखेका छन् । केही दिन बाली बसेपछि पुनः अस्ट्रेलिया फर्कन लाग्दा उनलाई अस्ट्रेलियाको अध्यागमनले समायो। अध्यागमनले तुरून्तै उनको मोबाइल र अन्य बिषयको जाँच गर्‍यो र तुरन्तै भिषा […]
भारतविरुद्ध जित निकाल्दै बंगलादेशले तोड्यो इतिहास
दिल्ली : बंगलादेशले टी–२० क्रिकेटमा भारतविरुद्ध पहिलो जित निकालेको छ । तीन टी–२० र २ टेस्ट खेल खेल्न भारत भ्रमणमा रहेको बंगलादेशले आइतबार भएको पहिलो टी–२० खेलमा भारतमाथि ७ विकेटको सानदार जित निकालेको हो। दिल्लीस्थित अरुण जेट्ली स्टेडियममा भएको खेलमा बंगलादेशले टस जितेर भारतलाई पहिले ब्याटिङको निम्ता दिएको थियो । पहिले ब्याटिङ गरेको भारतले २० […]
काठमाडौँ उपत्यकामा भारी वर्षा, कस्तो हुन्छ आजको मौसम ?